Canada Myanmar: May 2010
ကိုသန်းနိူင်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ၆ယောက်( အတွဲ ၃)
ရင်ခုံသံဟာ ကျောက်မီးသွေး ရထားခေါင်းတွဲကဲ့သို့ ခန္တာကိုယ်ကို မောင်းစေခဲ့ပါတယ် ။
သောင်ရင်းမြစ်ကမ်းပါး ၁၀မီတာကျော် ကို သူငယ်ချင်း ကျောင်းသားများအတွက်
နှလုံးသားလေးထဲက ပူပင်နေသော စိတ်တွေက တွန်းပို့ ပေးလိုက်ပါသည် ။
ဘယ်လို ရောက်သွားမှန်းမသိဘူး ။
ခပ်ဝေးဝေးတုံးက မြူနှင်းတွေလို့မြင်နေရခဲ့တဲ့ လေငွေ့ ထုကြီးဟာ
အနီးရောက်မှ မြင်ရတာက ဖုန်မှုံ့တပ်ပေါင်းစုကြီးဖြစ်နေပါတယ် ။
မြေပြင်က ပျံတက်လာတဲ့ ပြည်သူ့ သစ္စာ သွေးမှုံတွေရယ်
နအဖက တညလုံး ပစ်လိုက်ခဲ့တဲ့ ၁၂၀ မမ ကျည်ငွေ့ တွေရယ်
တရားတဲ့ ခံစစ်ပွဲကို ဆင်နွဲနေတဲ့ မြေပြင်က မြေမှုံတွေရယ်
သောင်ရင်းမြစ်က အပြစ်မဲ့တဲ့ ရေမှုံတွေရယ် ဟာ
နံနက်ခင်း မိန်းမပျိုရဲ့ အလှသစ္စာ တရားကို ငြိမ်သက်စွာ ပကတိဖေါ်ကျူးနေပြတယ် ။
ရေစပ်ကို စစ်ဖိနပ်စီးထားတဲ့ ခြေထောက်ကို လှမ်းတော့မယ် ဆိုလိုက်တာနဲ့ 
အားလုံးရဲ့ ခေါင်းတွေဟာ တဦးကို တဦး ကြည့်လိုက်ကြပြီး
မေးခွန်းပေါင်းများစွာကို အသံတိတ်မေးလိုက်ကြတယ် ။
နောက်ဆုံးနှတ်ဆက် တဲ့အနေနဲ့စစ်ဦးထုတ်ရှေ့ ကအပြားလေး တွေ ညိမ့်ပြကြတယ် ။
အေးမြနေတဲ့ ရေထဲကို ဆင်းလိုက်ခြင်းဟာ မြန်မာပြည်ထဲကို စတင်ဝင်ရောက်တဲ့ သက်ေတပါ ။
တနည်းအားဖြင့် နအဖ စစ်အာဏာရူးတွေ သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ နယ်မြေ ။
ကျွန်တော်တို့ အတွက်ကတော့ ရန်သူ့ က အားလုံးအသက်ကို ချွေတော့မဲ့
သတ်ကွင်းတခုအဖြစ် တညအတွင်း ပြောင်းသွားခဲ့ပါသည် ။
မနေ့ ညကအထိတော့ လွတ်မြောက်ရာနယ်မြေ ။
အခုမနက်မှာတော့ ရန်သူ့ နယ်မြေပါ ။
ခဲတပစ်စာအဝေး ကျဉ်းနေတဲ့ သိမ်လှီနေတဲ့ မြစ်နေရာက စကူးပါပြီ ။
ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ ရေကအေးမြပြီး တိမ်နေပါသည်
ဒူးဆစ် အထိ အေးပြီး ကျင်တက်သွားပါသည် ။
တခါတရံ ကျွန်တော်တို့ က ငယ်ပါချောင်းလို့ စနောက်ခေါ်ကြပါသည် ။
အေးလွန်းလို့ငယ်ပါလေးကကျုံ့ ပြီး အထဲကို ပြေးဝင်လို့ အတွဲလေးကို ကြိုးချည်ပြီးမှ ဆင်းရပါတယ်။
ရှမ်းပြည် ဆောင်းတွင်းမှာ ရေဆင်းချိုးသူတွေ နားလည်ပါတယ်။
မိုးတွင်းတုံးက တဝေါဝေါနဲ့သစ်လုံးတွေ ဆင်တွေကို ဆွဲချဘူးတာ
သူနဲ့ မဆိုင်တော့တဲ့ နာဂစ်သင်တန်းက
အပျိုမလေးတွေလိုဘဲ ငြိမ်သက်စွာ အသံတိတ်နေတယ် ။
ရင်ထဲကအပူတွေဟာ အေးမြတဲ့ရေ မွန်းကြပ်နေတဲ့ ယမ်းငွေ့ တွေကြောင် တောင့်တောင့်ကြီးဖြစ်စေခဲ့တယ်။
ရေထဲကို စနစ်တကျ တဦးကိုတဦး ကာပစ် အနေအထားနဲ့ဖြတ်ကူးကြပါတယ် ။
မြစ်ကိုကျော်ပြီး ကမ်းပါးကိုရောက်ပါပြီ ။
တဦးခြင်း သတိကြီးစွာနဲ့ သဲမြေကတဆင့် ကမ်းပါးပေါ်ကို တဆင့်တက် လိုက်ပါတယ် ။
မြေပြင်တခုလုံးဟာ ယမ်းငွေ့ တွေကြားမှာ ထိတ်လန့်တုံလှုပ်ဖွယ်ကောင်းအောင် ငြိမ်သက်နေပါတယ် ။
ညင်သာတဲ့ လှုပ်ရှားသံလေး နားထဲကို ရိပ်ကနဲ ဝင်လာပါတယ် ။
အသံကြားရာကို သေနပ်ပြောင်းနဲ့ ထိုးချိန်လိုက်ပါတယ် ။
ဆေးတပိုင်းသုတ်ထားတဲ့ လှေဖက်ကပါ ။
လေးငါးလှမ်း လျှေက်ပြီး လှေအောက်ကို ငုံ့ ကြည်လိုက်တော့ ကရင်တပ်က ရဲဘော် လူငယ် ။
ဘာလုပ်နေတာလဲ မေးလိုက်တော့ မနက်ထမင်းချက် တာဝန်ကျလို့ရေဆင်းခတ်တာ
လက်နက်ကြီးတွေ မိုးရွာသလိုကျတာနဲ့ ဝင်ပုံးနေရင်း အိပ်ပျော်သွားတာပါတဲ့ ။
လူကြီး(ဖထီး)ကို ပြန်မပြောနဲ့ နော်တဲ့ ။
ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ ကောက်ပဲသီးနှံတွေနဲ့ 
တရုပ်ပြည်က အပေါစား ဒုံးကျည် အမြောက်တွေကို လဲလှည်ပြီး မိုးမွန်အောင် ပစ်ခတ်လို့ အားလုံးဆုတ်သွားလို့ 
သူ့ လူကြီး(ဖထီး)လဲမရှိတော့ဘူးလို့ ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်
ကရင်ရဲဘော်လေးက ချက်ခြင်းဘဲ အမိုးနဲ့ အပါးကို သတ်ထားတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ကို
ဒီနေရာက မသတ်ရရင် တခြားနေရာက သွားသတ်မယ်ဟု ပြောပြီး မြစ်ကမ်းစပ်ကို ပြေးဆင်းသွားပါတယ် ။
( ၁၂၀ မမ ကျည်ဆံထိပ်ဖူးတလုံးသည် ၄၀၀၀ဘတ် (၁၅၀ ဒေါ်လာ)မှ ၆၀၀၀ ဘတ် (၂၀၀ ဒေါ်လာ)အထိရှိပါသည် ။
နအဖစစ်တပ်က တမိနစ်လျှင် အလုံး ၃၀ ပစ်ပါသည် ။
တမိနစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ ကို လေထဲမှာ ခွဲလိုက်တာပါ ။
တနာရီ ဆိုလျှင် ၃၆၀၀၀ ဒေါ်လာ ပြည်သူ့ ငွေနဲ့ လုပ်အားကို ဖြုန်းတီးနေတာပါ၊
သေနပ်ပြောင်းဝက အာဏာနဲ့ ပြည်သူ့ လုပ်အားတွေနဲ့ ပြည်သူ့ အာဏာတွေ သိမ်းတဲ့ ပွဲ)
ကမ်းနဖူးပေါ်က နောက်ကာ ကတုတ်ကျင်းတွေ ဆက်သွယ်ရေးမြောင်းတွေ ကို အရေးပေါ် ဇော်ဂျီတွေလို
သေနပ်ကိုကိုင်ပြီး အပြေးတက်ကြပါတယ် ။
မတိုင်ပင်ထားတဲ့ ပြေးနေတဲ့ ပစ်မှတ်နေရာက ကျောင်းသားတပ်မတော် ရုံးတည်ရာ ကတုတ်ကျင်းဆီသို့။
တာဝန်ကျ ကျောင်းသား ၂ဦးက အနီးအနားမှာ ဗုံးမှန်လို့ သေနေတဲ့ ကြက်သေတွေကို
တယောက်က အမွေးနှတ်ပြီး တယောက်က ထမင်းချက်နေပါသည် ။
ကိုသန်းနိုင်က ဟေ့ကောင်တွေ နင့်မေကလွား ညကဘယ်မှာအိပ်နေတာလဲ ဟု မောမောပန်းပန်းနဲ့ မေးလိုက်ပါတယ် ။
တပ်ရင်းမှုး ကျွန်တော်တို့ ကမိုးလင်းချိန်ကင်း ဆိုတော့ တညလုံး ဆူနေတာနဲ့ 
ခေါင်းအုံးကို အပေါက်ဖေါက် ခေါင်းကိုစွပ်ပြီး ဆန်အိပ်တွေကြားမှာ ဝင်အိပ်နေတာဟု မှို့ တွေ ဖွေးဖွေးနဲ့စပ်ဖြီးဖြီး ပြောပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ တာဝန်တွေပြီးခါနီးပြီး ခဏနေရင် ထမင်းရော ဟင်းရော ရပြီဟု သတင်းဆက်ပို့ ပါသည် ။
ကိုသန်းနိူင် စိတ်ဆိုးပြီး တယောက်တည်း တပြစ်တောက်တောက်နဲ့ ဆဲပါတော့သည်။
ပြီးမှ ချက်ပြီးသားထမင်းဟင်းတွေ မင်းအဘတွေ ကျွေးမလို့ လားမေးရာ
ကျောင်းသား၂ ယောက်က တယောက်မျက်နှာ တယောက်ကြည့်ပြီ
ကျွန်တော်တို့ ဖက် မေးစေ့ငေါ့ပြီးမေးပါသည် ။
ကျွန်တော်တို့ လည်း ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားပါတယ် ။
သူတို့ ၂ ယောက်ရဲ့ အူကြောင်ကြောင် အမူအရာကို ကြည့်ပြိး
ဒီလောက် အရေးကြီးတဲ့ အချိန်မှာ ရှိစုမဲ့စု ခေါင်းအုံးကို ဖေါက်ပြီး
ကမ္ဘာပျက်သွားတာ မသိလိုက်ဘဲ အိပ်နေတဲ့ သူ ၂ ယောက်
( ၂၀၁၀ အထိ မြန်မာပြည်ထဲမှာ ကမ္ဘာပျက်လောက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ
ဘီယာအိုး အရက်အိုး အတင်းအိုး အာဏာအိုးတွေထဲမှာ စိမ်ပြီး
အိပ်မောကျနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းသူတွေ နိူင်ငံရေးသမားတွေ
အများကြီးဘဲလေ အစည်းပြေနေကြတာ )
၂ဖွဲ့ ခွဲမယ် ။ ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေ လိုက်ရှာကြမယ် ။
ရန်သူနဲ့ အရင်တွေ့ သူက သေနပ်ဖေါက်အချက်ပေးပြီး စပြေးတော့ လို့ 
ကိုသန်းနိူင်က အမိန့် စပေးပါတယ် ကျွန်တော်နားလည်ပါသည်
ထိုစဉ်က ကိုသန်းနိူင်က စစ်မြေပြင်တာဝန်ခံပါ ဗဟိုကလူလည်း သူ့ အမိန့် နာခံရပါသည် ။
အဓိက တာဝန်က ကျန်နေသော ရဲဘော်ရဲဘက် ကျောင်းသားရှာရန်သာဖြစ်ပါသည် ။
ထို့ အတွက် အသက်ပေးသင့်ရင် ပေးရပါမည် ။
ရန်သူနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရာနေရာက ပွိုင့် ဖိုက်သံကမှန်မှန်ထွက်နေသေးပါတယ် ။
ကရင့်တပ်မတော်က ကွန်မန်ဒို တချို့ ရှိနေသေးတဲ့သက်ေတပါ ။
နေုာက်ဆုံးအချိန်ထိ တာဝန်ယူပြီး ဖလူးထိပ်တိုက်ကနေ သေဆုံးသည်အထိ
စစ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကို ကာပစ်ပြီး တာဝန်ယူသွာခဲ့သော
ကရင့်တပ်မတော်မှ ကွန်မန်ဒို ကရင်ရဲဘော်များကို ဒီနေရာက ဂုဏ်ပြုပါတယ်
ရန်သူနှင့်ပေါင်းသွားသော ကရင်များကို ပြင်းထန်စွာနာကျည်းပါသည် ။
ကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်ကို နောက်ဆုံး အကြိမ် စစ်ဆေးရမယ့် တာဝန်ဖြစ်လာပါသည် ။
ကတုတ်ကျင်းတွေထဲမှာတော့ မည်သူမျှမရှိတော့ပါ ။
နောက်မှသိရတာက ရန်သူ့ တပ်ခွဲ တခွဲ ဟာ ထိုင်းနိူင်ငံကို ည၁၂နာရီလောက်မှာ ခိုးဝင်ကာ
အနောက်ဖက်က ဝင်တိုက်တာပါ ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စစ်ဥပဒေမှာ လုပ်ခွင့်မရှိပါဘူး ။
ခုခံရေးတာဝန်ကျသူတွေကလဲ သဝခ လို့ ခေါ်တဲ့ကရင်အရံတပ်ခွဲကဆိုတော့ ခံစစ်ပေါက်ခဲ့တာပါ ။
သဝခမှာက အရံတပ်တွေဖြစ်ပြီး စစ်မြေပြင် အတွေ့ အကြုံနည်းကြပါတယ် ။
မကြာခဏဖြစ်ပွားခဲ့လို့ ထိုင်းစစ်တပ်ကရှောင်ခဲ့ရပါတယ်ကလိမ်ကကျစ်မြန်မာ့တပ်မတော်အစစ်ပါ ။
နောက်က ရန်သူဝင်ပြီး ပေါက်တာဆိုတော့ ပြန်ပြီး ပိတ်ဆို့ ရှင်းလင်းရေးလုပ်ဖို့ ကလဲ
ကရင်အရာရှိတွေက ဝလေက ခရစ်စမတ် ဘာသာရေးပွဲ မှာရောက်နေကြပါတယ် ။
ကျောင်းသားတပ်ခွဲမှုးတွေကလဲ ကျွန်တော်တို့ နဲ့စခန်းအပြင်မှာပါ ။
ဆုတ်ရန်တခုထဲ နားလည်ပြီး ဆုတ်ခွာကြပါတယ် ။
မြန်မာ့အသံကတော့ အကြီးအကျယ်ကြွားလုံးထုတ်ပါတော့တယ် ။
ဖလူးတိုက်ပွဲကြီးကို ဘယ်လိုတိုက်ခဲ့ရတယ်။ ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ပေါ့ ။
ကရင့်လက်နက်တွေ အစုလိုက် အပုံလိုက်ရတာကိုမြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ပြတော့
ကျွန်တော်အံကြိတ်မျက်ရည်ကျပြီး ကြည့်ရပါတယ် ။
အဲဒီတုံးက ပြောပြချင်ပေမဲ့ အခြေအနေက မပေးခဲ့ပါဘူး။
ရန်ကုန် စစ်ရုံးချုပ်က လူကြီးနဲ့ နီးသူတွေရာထူးတွေ တက်ကုန်ပါတယ် ။
မိုးရွာသလို လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုအောက်မှာ ဆက်သွယ်မှုမှားပြီးကရင့်တပ်က ဆုတ်ပေးလိုက်တာပါ ။
မြန်မာစစ်အာဏာရှင်ဖက်က တပ်စုမှုး တပ်ခွဲမှုး တပ်ရင်မှုး တချို့သီဟတွေ သူရတွေ အချောင်ရသွားတာပါ ။
ပေါ်တာစရိပ်တွေ ဖြတ်ခုတ်ဝေစားပြီး ဗျုဟာမှုးတွေ အုပ်လိုက်ချမ်းသာပါတော့တယ် ။
မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ပြဿနာ ဖြစ်နေသမျှ စစ်ဆင်ရေးစားရိတ်ကို ဝေစားမျှစားတာ
ကိုသန်းနိုင်၊ ကိူဇော်ဖော် ကိုကျော်မင်းဦး ကိုနေမျိုး ကိုအေးဝင်းတို့ က
မြစ်ကမ်းပါးတလျှောက် ကတုတ်တွေကို လိုက်စစ်ပါတော့တယ် ။
ကျွန်တော်နှင့် ကိုမောင်လှက အလယ်ကဖြတ်ပြီး ကရင့် ဆေးရုံဖက်သို့ သွားကြပါသည် ။
အချိန်က နံနက် ၆ နာရီကျော်ကျော်မှာပါ ။
ရန်သူမြန်မာစစ်တပ်ကလည်း စစ်ကြောင်း များဖြန့် ပြီး
ဖလူးစခန်းရှင်းလင်းရေး အတွက်ဝင်လာပါသည် ။
ဆင်နဲ့ ကျား လယ်ပြင်မှာတကယ်တွေ့ ခဲ့တဲ့ ပွဲပါ။
ရန်ငါ စည်းဆိုတာ အဲဒါပါဘဲ ။
ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်း အစစ်ပါ ။
သူသေ ကိုယ်ရှင် လုတဲ့ပွဲ အစစ်ပါ ။
စားပွဲပေါ်က လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး သမားများ
ပိုက်ဆံ ကောက်လို့ ကောင်းအောင် ရေးကြ ပြောကြနေပါတယ် ။
ပြည်ပနေ အာကြီး အာလေးများကို မှတ်ထားပါသည် ။
မကြာမှီ လာတော့မည့် စစ်ပွဲတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပါသည် ။
မိုးလင်းကာစဆိုတော့ လူတရက်ကျော် မြက်ပင်တွေက နှင်းတွေ စိုနေပါသည် ။
စစ်ဘောင်းဘီကလည်း နှင်းတွေကြောင့် စိုရွဲနေပါသည် ။
တလှမ်းခြင်း ရှောက်လာရင်း မောင်လှက သတိထား ရှေ့ မှာ အသံကြားရတယ် ။
ရိပ်ကနဲ ရှေ့ ခပ်လှမ်းလှမ်း စစ်ယူနီဖေါင်းနဲ့ လူတစုကို ဘွားကနဲ တွေ့ လိုက်သည် ။
ပုခုံးတံဆိပ်ကို အမြန်ကြည့်လိုက်တော့ မဟာဗန္ဒုလ တံဆိပ်ကိုတွေ့ လိုက်တယ် ။
အနီးဆုံးမှ လူတရပခန့်သစ်ပင်ငယ်နဲ့ ကျွန်တော်ပုခုံးက ဓါးနဲ့ လှံ တံဆိပ်ကို ကွယ်လိုက်တယ် ။
ဒီနေရာမှာ မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက် ဟာ အသက်ရဲ့ ထွက်ပေါက်ဆိုတာ တွေ့ လိုက်ရတယ် ။
မြန်မာတပ်ကြပ်ကြီးက စပြီး ကျွန်တော့်ကို ပစ်ပါတယ် ။
မောင်လှက ကျွန်တော်နောက်မှာရပ်နေတာပါ ။
ဂျီသရီး ကျည်ဆံတွေ ကာဘိုင်ကျည်တွေ ဘေးကသစ်ပင်တွေကို ဖြတ်ချလိုက်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် တက္ကသိုလ် အရံတပ်ရင်းမှာ တပ်ကြပ်အထိ မြန်မာစစ်ပညာ သင်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။
တောတွင်းမှာလည်း နိူင်ငံတကာ သင်တန်းတွေ တက်ဖူးပါတယ် ။
ဘယ်မအေပေးတပ်စုလဲ မြေပုံညွန်းမှားလာတာ ၊ စကားဝှက်ပြောဟု ကျွန်တော်အော်ပြီးမေးလိုက်ပါသည် ။
ပုခုံးပေါ်က အနက်တစ်ပွင့်နဲ့မျောက်တကောင် ခုန်ထွက်လာပါသည် ။
ကျွန်တော့နောက်ကနေ အေကေ ၄၇ ကိုင်ပြီး ရှေ့ တက်ခါ ပစ်ပါတော့တယ် ။
အဲဒီတအုပ်လုံး ဂျွမ်းထိုးမှောက်ခုံဖြစ်သွားပါသည် ။
ပြည်သူ့ ကျောင်းသားနဲ့ လခစားစစ်သား အရည်အချင်းကွာပါတယ် ။
သတ္တိခြင်းလည်းကွာပါတယ် ။ ခံယူချက်ခြင်းလည်းကွာပါတယ် ။
လခစားနဲ့ပုတ်သင်ညိုစား တာလဲကွာပါတယ် ။
၁၀ ယောက်တယောက် ပေးတိုက်ချင်တယ် ။
ကိုဌေးပြေးတော့ဆိုပြီး မောင်လှက အချက်ပေးပါတယ် ။
လမ်းကျွမ်းကျင်သော မောင်လှက လွှားကနဲ လွားကနဲ ရိပ်ကနဲ ရိပ်ကနဲ
သစ်ပင်များက နောက်မှာကျန်ခဲ့ပါသည် ။
ထိုစဉ်မှာဘဲ ကိုသန်းနိူင်တို့ ဖက်က သေနတ်သံမှာ ကြားပါတော့တယ် ။
ပြေးရမဲ့ လမ်းကြောင်းဟာ သေနပ်သံ ထွက်ခဲ့တဲ့ ၂ နေရာရဲ့ ဆန့် ကျင်ဖက်ကနေ
ထိုင်းနိူင်ငံကမ်းဖက်ဆီ ဆိုတာ ကွန်ပြူတာမေးရင် နောက်ကျနေအုံးမယ် ။
အသက် ၁၃ နှစ်သားကထဲက နည်းမျိုးစုံပြေးခဲ့ဘူးပါတယ် ။
ပေါ့ပါးခြင်း သွက်လက်ခြင်းဟာ ငှက်အသွင်ပါဘဲ ။
နောက်က ပြေးလိုက်လာတဲ့ ကာဘိုင် ဂျီသရီး ကျည်ဆံတွေက
ဘေးကမြက်ပင်တွေ သစ်ပင်ငယ်တွေကို ဒါးတွေနဲ့ လိုက်ရှင်းနေသလိုဘဲ ။
သေချာတာက ဖြောင့်ဖြောင့်မပြေးဘဲ အခုတ်ခံရတဲ့ သစ်ပင်ငယ်တွေကို ဖြတ်ပြေးတာပါ ။
အရှိန်နဲ့ လှည့်ပစ်နေတဲ့သေနပ်ပြောင်းဝဟာ ရုပ်တရက် ပြန်လှည့်ရန် ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိူင်ပါ ။
ဒီအတွက်သေဘေးကို တထွာကျော်က ၁၀မိနစ်အတွင်းမှာ လွတ်သွားပါတယ် ။
ကိုသန်းနိူင်တို့ကိုဇော်ဇော်တို့ အုပ်များပြီး ရန်သူနဲ့ တွေ့ တော့ တိုင်ပင်စရာမလိုဘဲ
အေကေ ၂လက်ကို နောက်ပြန်ထမ်းပြီး ပစ်ခတ်ရင်း ရင်ဘောင်တန်းပြေးကြပါတယ် ။
သူတို့ အဖွဲ့ က ငှက်ပျောတောကို ဖြတ်ပြေးပြီး သောင်ရင်းမြစ်ကို ဖြတ်ကူးကြတာပါ ။
နှလုံးအားနဲနေတဲ့ ကိုသန်းနိူင်ကတော့ အမောဆို့ နေလို့၂ ခါလောက်နားပြီး
နောက်ဆုံး တော့ ကိုဇော်ဇော် ကဘဲ တွဲ တဝက် ထမ်းတဝက်နဲ့ ပြေးခဲ့ရပါတယ် ။
၂၀၁၀ မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အပုတ်ချ အစည်းပြေ တော်လှန်ရေးကာလ ဆိုရင်တော့
ကိုသန်းနိူင်ဆုံးတာ အဲဒီကထဲက တောထဲမှာ ကျန်ခဲ့ဘို့ ပါဘဲ ။
၂နေရာခွဲပြေးနေပေမဲ့ တူတာတွေရှိနေခဲ့တယ် ။
မောလွန်းလို့အံဖတ်လားမသိပါဘူး ဆို့ တို့ တို့ ကြီး၊ ရေငတ်ပြီး အာတွေခြောက်လာပြီး
ချွဲတွေ သလိပ်တွေပြန်ထွက်လာတယ် ။
မျက်လှည့်ဆရာတွေ အတုယူနိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာ တခုလဲပြီးသွားတယ် ။
သေနတ်ကိုင်ပြီး ဒုံးကျည်လိုပြေးနေရာကနေ စစ်ဝတ်စုံနဲ့ စစ်ဖိနပ်ကို အရှိန်မလျှော့ဘဲ ချွတ်တဲ့ နည်းပါ ။
မြန်မာစစ်တပ်က ဝတ်စုံပြည့် လက်နက်အပြည့်နဲ့ထိုင်းနိူင်ငံကို ဝင်ရောက်ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ ကတော့ ထိုင်းနိူင်ငံကို ဖြတ်ဖို့သေရေးလား ရှင်ရေးလားမသိခင်မှာ
အပြေးမပျက် စစ်ယူနီဖေါင်းကို အပြီးချွတ်နိူင်ခဲ့ပါတယ် ။
မောနေတဲ့ကြားက အချစ်ဆုံး သေနပ်ကိုလည်း သစ်ပင်ကြီး ၂ ပင်က
ဆွဲလာတဲ့ ကောက်ကြောင်းဆုံမှတ် ဖြတ်ရာမှာ သဲတူးပြီး အနားပေးလိုက်ပါတယ် ။
ပြီးတာနဲ့ချောင်းထဲကို ဒိုင်ဗင် အတင်းထိုးရပါတယ် ။
ခေါင်းနဲ့ သဲဝင်ဆောင့်တဲ့အထိ ရေငုတ်လိုက်ပါတယ် ။
နောက်လိုက်ပစ်နေတဲ့ ကျည်ဆံတွေက ချောင်းထဲကို ခဲနဲ့ ပစ်နေသလိုပါဘဲ ။
မောင်လှကြီးပြောသလို ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ ကို မခေါ်သေးလို့ ဆိုတာ မှန်သလို
သေနေ့ မစေ့သေးဘူးဆိုတာ သိပ်မှန်တာပါဘဲ ။
ဟောဟဲခတ်နေတဲ့ ကျွန်တော် ချောင်းတဝက်ကျော် ကူးမိတော့ အင်ဂျင်စက်သံကြီးတွေ စကြားပါတယ် ။
ထိုင်းနိူင်ငံ ကမ်းစပ်ရောက်တော့ ထိုင်းမြေပြင် လက်နက်ကြီး တပ်ရင်းက
ထိုင်းနယ်မြေကို စစ်ဆေးချိန်နဲ့ တိုးပါတော့တယ် ။
လက်နက်ကြီး သံချပ်ကာကားတပ်ဖွဲ့ထိုင်း ရဲဘော်တွေက လံကွတ်တီ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကို
ဖမ်းဆီးပြီး အထက်အရာရှိထံပို့ ပါတော့တယ် ။
ထိုင်းနိုင်ငံ စစ်မြေပြင် သတင်း ထောက် လည်းရောက်လာပါတယ် ။
(လေယာဉ်ပျံ ကိုပြန်ပေးဆွဲရာမှာ ဘယ်လိုထင်လဲမေးတော့
ကျွန်တော်က သူရဲကောင်းတို့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သဘောတူပြီး
ဘန်ကောက်ပို့ က ရေးပေးသူဖြစ်ပါတယ် ။
(ခင်ဗျားပြောတဲ့ လေယာဉ်က ရဲရင့် (အခု အမေရိက)၊ စန်းနိုင် (ရဲသီဟ)တို့ မြန်မာလေကြောင်းပိုင် ဖော်ကာကို ဆွဲပြီး ထိုင်းစစ်တပ်လေယဉ်ကွင်းမှာ ဆင်းခိုင်းတဲ့ကိတ်စ။ ဘန်ကောက်ပို့စ် မျက်နှာဖုံးမှာပါခဲ့တယ်။ လေယဉ်ကြီးကို သိပ်မနီးမဝေးကနေညဘက်မှာ ရိုက်ထားတာ။ မီးတွေထိန်လို့။
ခင်ဗျားက ဌေးတင့် အေဘီ စစ်ရေး ဌာနလုပ်လို့ ဒေါက်တာသောင်းထွန်း မြွေကိုက်သွားတယ်။ အေဘီစစ်ရေးဌာနရှိတယ်ဆိုလို့နိုင်ငံခြားအဖွဲ့ အစည်းတွေကို ဒိုင်ခံရှင်းလိုက်ရတယ်။မိတ်ဆွေတဦး)
အဲဒီ အစ ၈၈ကာလတုံးကထဲက မြန်မာပြည်ကို လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲနဲ့ပြောင်းလဲဖို့ ဆိုရင်
အကူအညီမရဘူးဆိုတဲ့မူနဲ့ သွားနေတာ အခုထိဘဲ ။ မဖေါက်နိုင်သေးဘူး ။
နာဂစ်မှာ စစ်သဘေ်ာကြီးတွေ ရိက္ခာအပြည့်နဲ့ အကူညီဝင်မပေးရဲကြဘူး။
တချို့ နိူင်ငံတွေတော့ လက်နက်တိုက်ပွဲကနေ
လွတ်လပ်ရေးရကုန်ပြီ။ ကြောက်တတ်ရင် လွဲဆိုတာမှန်သလားမသိ ။
ကျွန်တော်က ၁၉၈၈က ကျောင်းသားဆိုရင် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် အမြဲတန်းသဘောထားပါတယ်)
လံကွတ်တီနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကို ဖါးခပ်မတ် လို့ ခေါ်တဲ့ထိုင်းပုဆိုးလာပေးပါတယ် ။
မြန်မာပုဆိုးက ကွင်းဖြစ်အောင်ချုပ်ထားသော်လည်း ထိုင်းရေလဲပုဆိုးက အစအရှည်ကြီးပါ ။
ထိုင်းစစ်တပ်က တပ်ရင်းမှုးနဲ့ တွေ့ ကာ စစ်ဆေးခံပြီး အခြေအနေအရ ထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်လာခဲ့ပြီး
ကျောက်ခက်မှာ စခန်းချနေသော ကိုမျိုးချစ် တပ်ရှိရာသို့ပြန်မည် ဖြစ် ကြောင်း တင်ပြသောအခါ
ကိုသန်းနိုင် အပါအဝင် ကိုဇော်ဇော်တို့ နှင့်ပြန်တွေ့ ကြပါသည် ။
တယောက်မျက်နှာ တယောက် အားပါးတရ ကြည့်ကြပါသည် ။
ပြန်မတွေ့ တော့ဘူးလို့ မနက်ကတင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာ ။
တော်လှန်ရေး သံယောဇဉ် ခံစားမှုနဲ့ အသက်ပေးပြီး
ကျန်ခဲ့ သူတွေကို စွန့် စွန့် စားစား ဝင်ကယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်
တယောက်မှ မှန်ကန်သော သစ္စာတွေကြောင့် ဒဏ်ရာမရခဲ့ပါဘူး ။
ကျွန်တော်တို့ အသက်ပေးပြီး ချစ်ခဲ့ဘူးကြပါသည် ။
ဒေါက်တာဆင်သီယာ ဆေးခန်းဖွင့်စမှာ အလှုရှင်က စောင်တွေပေးလို့ သွားယူခဲ့ပါသည် ။
ပိုသည့်စောင်များကို လိုအပ်နေသည့် ငှက်ဖျားပျောက်ဆေးဝယ်ရန် အတွက်ရောင်းလိုက်ပါသည်
ကိုသန်းနိူင်စောင်ရောင်းသည်ဆိုတဲ့ တဖက်သတ် အပုတ်ချသံဟာ
မဲဆောက်မြို့ နေ ကျောင်းသားစု ကထွက်လာပါသည် ။
အဲဒီတုံးက စတင်မွေးဖွားလိုက်တဲ့ အပုတ်ချစိတ်ဓါတ် ၊ အတင်းပြောစိတ်ဓါတ်တွေဟာ
အနှစ်၂၀ လုံးလုံး ကျွန်တော်တို့ အုပ်စုတွေ ဆီမှာ ကြီးထွားခဲ့ပါတယ် ။
ကိုသန်းနိူင်က ဒေါပွပြီး ရဲဘော်ကျောင်းသားတွေ
တောထဲမှာ စစ်တိုက်ရင်းငတ်နေတာ ဘယ်သူကမှ မမြင်ကြဘူး ။
လိုအပ်ရင် ဒမြတိုက်ပြီး တိုက်ပွဲဆက်ဝင်မည်ဟု ကြွေးကြော်လိုက်ပါသည် ။
ကြားဖူးနားဝနဲ အများက ဒမြသန်းနိုင်ဟု သေဆုံးသည်အထိ ခေါ်ကြပါသည် ။
တကယ် ဒမြတိုက်ခဲ့သူမှာ သူ့ လက်အောက်က
နာမည်ခံမည်ဆိုပြီးမှ ခွဲထွက်ခဲ့သူ အခြားတဦးဖြစ်ပါတယ် ။
၂၀၁၀ မှာ ကိုသန်းနိူင် ဆုံးတော့ ဘာမှသေသေချာချာ မမေးတော့ဘဲ ဒမြသန်းနိူင်ဆုံးပြီတဲ့ 
ကိုသန်းနိူင်မိဘတွေက ကြေးရည်တတ်တွေဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲအတွက် စည်းစိမ်နဲ့ နေရတဲ့ ဘဝကို စွန့် လွတ်ခဲ့သူတဦးပါ ။
တော်လှန်ရေးကို တခြားသူတွေလာသလို့ သွားနဲ့ ဟိုပစ္စည်း ၂ ခုတည်း လာခဲ့သူမဟုတ်ပါ ။
ရွေထုတ်နဲ့ လာခဲ့ပြီး သေနတ် စဝယ်ကိုင်ခဲ့သူပါ ။
၁၉၈၈ တောထဲရောက်ခါစက စိတ်ဓါတ်တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်တာလဲ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ ဘယ်မှာလဲ ။
ဘယ်နတ်ဆိုးက ခိုးပြေးကုန်ပြီလဲ ။
သတင်းတွေ အတင်းတွေကြားရတာ ရင်ထဲမှာ တင်းကြပ်အောင်နာမိတယ် မျက်ရည်ကျမိတယ် ။
ထောင်ထဲမှာ လက်နက်မချသေးတဲ့သူတွေ ကို
အချင်းချင်းတွေလဲ အပုတ်သံတွေဘဲ ထွက်ထွက်နေတယ် ။
တရားခံကတော့ ၁၉၉၃မှာ အာဏာရူးတစုကြောင့် ကျောင်းသားတွေ ၂ ခြမ်းကွဲပြီး
ကျောင်းသားသွေးတွေ စွန်းရာက မြစ်ဖျားခံတာဘဲ ။
အခုတော့ ၁၈၈၄ တုံးကလို ဒို့ မြန်မာတွေ အစည်းပြေသွားပြီး
အဲဒီတုံးက နယ်ချဲ့ က ဝင်အုပ်ချုပ်တာ နှစ် ၁၀၀ လောက် ကြာသွားတယ် ။
အခုရော ၁၉၈၈ လူငယ် လူလတ်တွေ တိုက်ပွဲဝင်နေတာ ၂၀ နှစ်ရှိပြီ ။
အသက် ၄၀ နဲ့ ၅၀ အရွယ်ကောင်းတွေ နောက်ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ ၂၀ လား ၄၀ လား
၂၀၁၀ မှာ စုစည်းရေးမူ မချနိူင်သေးရင် အာဏာရှင်ကတော့ နောက် နှစ် ၁၀၀ ကျော်ဘဲလေ ။
၂၈ မေလ ၂၀၁၀
(ကိုသန်းနိူင်ကို ဂုဏ်ပြုပြီး ပြန်လည်ညီညွတ်ရေးအတွက် အမှန်တွေကို ရေးပြတာပါ )
(ကိုဇော်ဇော် (ကနေဒါ) ကိုကျော်မင်းဦး ( သတင်းပျောက်) ကိုမောင်လှ (မဲဆောက်)
ကိုနေမျိုး ကိုအေးဝင်းတို့ တသိုက်ကို
သန်းနိုင်သေဖို့ ဆိုတာတွေ .
စခန်းထဲက ရဲဘော်တွေ ၂ ယောက်ကို
ကယ်ထုတ်နိုင် ခဲ့ တာတွေ ။
ငှက်ပြောတောထဲ မှာ အံဖတ်ဆို့ လုနည်းပါး
ချွဲ တွဲကျ နေတာတောင် မရပ်ရဲပဲ ပြေးခဲ့ ကြတာတွေ ၊
သတင်း ထောက် ၊ လာတာတွေ ကို ရေး ပါ..
ဖလူးစခန်းကို ထိုင်းဖက်ကမ်း တောင်ပေါ်က ပြန်ကြည့် ပြီး မျက်ရည် ကျဖြစ်ကြတာတွေ
အဲဒီ ဒုတိယပိုင်း က ပိုပြီး အသက်ဝင်တဲ့ ကျုပ်တို့ ကျောင်းသားတွေ ရဲ့ အနစ်နာခံမူ့ တွေ စိတ်ဓါတ်
တွေကို မီမောင်းထိုးပြမဲ့ အပိုင်း ဖြစ်လိမ့် မယ်..
နောက်မှ ၀က်ဆိုက်ပေါ်မှာဖြေးဖြေးခြင်း ပြန်ပြင်လို့ ရတယ်
ပထမပိုင်းနှင့် ဒုတိယပိုင်း အရမ်းကြာသွားရင် မဖြစ်ပါ..
ခင်ဗျား စာရေး အား ကောင်းတာအရင်က မသိခဲ့ ပါ့ လား ..အမှန်တိုင်း
ပြောရ ရင် ဘယ်မှာမှ ခင်ဗျား ခုလိုရေးတာတွေမတွေ့ ခဲ့ ဘူးပါဘူး..
ကျပ်က မှ ကဗျာလေးကာတွန်းလေး အေဘီ ခွပ်
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မျိုသိပ်ထားတာတွေ မအောင့် အီးနိုင်တော့လို့ 
နှစ်တရာ ကို တခါ
ဥရောပ က မီတောင် ကြီးလို့ ပဲ ခင်ဗျားကို တင်စားလိုက်ပါတယ်...)
တင်ပြသူ Mr Htay Tint at 5:07 p.m. No comments: Links to this post
တော်လှန်ရေးကို မိမိမျက်စေ့ ရှေ့ က စတင်ကြဖို့ လိုပါပြီ
တော်လှန်ရေးကို မိမိမျက်စေ့ ရှေ့ က စတင်ကြဖို့ လိုပါပြီ ၊ ပြည်တွင်း ပြည် ပ ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်ကြဖို့ လို
အပ်လာကြခြေပြီ ၊ ပြည်ပ မှ ပြည်တွင်းထဲကို UG တွေထားသလို ပြည်တွင်းထဲမှလည်း ပြည်ပ သို့ ပြန်လည် ၍ UG များထားကာ အပြန်အလှန် ညပ်ပူးညုပ်ပိတ် ၊ ပါးကိုက်လျှင် နားကိုက် စစ်ဆင်ရေးမူ ဖြင့် ရ ရာ နည်း လမ်း ပေါင်းစုံ ဖြင့် မိမိတို့ ရောက်ရှိရာ နေရာ ဒေသ တိုင်းတွင် မိမိ တို့ ၏ နည်းစပ်ရာ ပြစ်မှတ်များကို အသီးသီး တာဝန်ယူ စတင် ကြရ တော့ မည် .. ပြည်တွင်း မှ တိုက်ပွဲ များကို ပြည်တွင်း မှ သူများက ရရာ နည်းလမ်းပေါင်းစုံ ဖြင့် စွမ်းစွမ်းတမံ အသက်စွန့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေကြသလို ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်ပရောက် တော်လှန်ရေး ရဲဘော်ကြီးများကလည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ထိထိရောက်ရောက် စစ်တပ် နှင့် ၎င်း တို့ ၏ သားသမီးများ ဆွေမျိုးများ နည်းစပ်ရာ စစ်အစိုးရ ၏ သံရုံးများ ကို မိမိတို့ ရောက်ရှိရာ ဒေသခံများနှင့် ပေါင်းပြီး နည်းမျိုးစုံ ဖြင့်တော်လှန် ဆန့် ကျင်ကာ မြန်မာ စစ်အစိုးရ ကို အချက်ပြ သတင်း ပို့ ရတော့ မည် အချိန်ရောက်ပြီ ဖြစ်သည် ၊ ကျွန်ုပ်တို့ တော်လှန်ရေး ကြီး၏ အထိကရ ပြစ်မှတ်ကြီး တခုဖြစ်သည့်NLD ပြည်တွင်းခံတပ်ကြီးကို စစ်အစိုးရမှ အပြီးသတ်ချေမုံးရန် တိုက်ပွဲ
ခေါ်လိုက်ပြီဖြစ်သည် ၊ ပထမ ဆင့် တွင် ထိုသူများကို ကျန်ုပ်တို့ ဖက်ပါလာအောင် စည်းယုံး ရမည် ၊ သ
ဘောထား ဆွေးနွေးရမည် ဖြစ်သည် ၊ ဒုတိယအဆင့် တွင် ပုဂိုလ်ရေး အရမဟုတ်ပဲ စစ်အစိုးရကို မိမိတို့ 
တော်လှန်နေသည့်လုပ်ရပ်တိုင်း ၊ စတိတ်မန့် တိုင်းကို ထိုသူတို့ ကို တိုက်ရိုက်ပေးရမည် ဖြစ်သည်
သံရုံး မှ သူများ ၄င်းတို့ ၏ သားသမီးများ နှင့်ကြိုးစားဆက်သွယ် စကားပြောကာ မြန်မာပြည်သို့ မပြန်
ရန် ၊ မိမိရောက်ရှိ၇ာ နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေး ခိုလုံခွင့် လျှောက်ရန် လုပ်ဆောင် ကူညီပေးရမည် ။ ဥေ၇ာပ
အမေရိက နှင့် ကနေဒါ နိုင်ငံ စသည် တို့ တွင် နာမည် မဖေါ်ပြလိုသော်လည်း ထိုသို့ ဖြစ်ရပ်များ အောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည် အချို့ အများစုမှာ နိုင်ငံေ၇းခိုလုံချင်နေကြသူများ မြန်မာအစိုးရကို တနည်းနည်း
ဖြင့် အတွင်းစိတ်ထဲ မှ ကြိတ်၍ မကျေနပ်နေကြသူများဖြစ်ကြသည်... သံရုံးရှေ့ တွင် မတ်တပ် ရပ် ၍
ဆန္ဒပြကြရမည့် အချိန် ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ ပြီဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကြိမ်ဖန်များစွာ ငြိမ်းချမ်းစွာ လုပ်ပြီးခဲ့ ပြီ
ဖြစ်သည် ၊ သံရုံးအထသို့ ဝင် ရောက် တွေ့ ဆုံ ကြရတော့ မည် အချိန်ဖြစ်သည် ၊ ပြည်တွင်းတွင်လည်း
လမ်းပေါတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ပြ တန်းစီ လှည့် လည်ခဲ့ ကြပြီးပြီဖြစ်သည် ၊ ပြည်သူတို့ သည် အကြောက်
တရား ဖြင့် ငြိမ် ၀ပ် သွားကြမည် မဟုတ် ပဲ ပေါက်ကွဲတပ်သည့် ယမ်းတို့ ကို စုစည်း ဖိသိပ်ထားသကဲ့ သို့ 
၄င်းတို့ အစိုးရအတွက် အန္ဒရယ် ကြီးကြောင်း ၄င်းတို့ သဘောပေါက်သင့် ကြပြီဖြစ်သည် ။
ရောက်ရာ နေရာ က တပ်နိုင်သောနည်းလမ်းများဖြင့်တော်လှန်ရေး အရှိန်အဟုန်မြှင့် တင်ကြ..
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 2:26 a.m. No comments: Links to this post
ရှစ်ဆယ် ရှစ် မျိုးဆက်များ
ရှစ် ဆယ့် ရှစ် လော ။
တိတ် တ ဆိပ် ဉ်
မှတ်သားဂုဏ်ပြုကြစေလော ။ ။
............ ( Timothy Zaw Zaw )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 8:39 p.m. No comments: Links to this post
ကိုသန်းနိူင်နှင့် ကျွန်တော်တို့ ၆ ယောက်( အပိုင်း၂)
စာမူကို အချောသတ်ရန်စီစစ်နေပါသည် ။ မှားနေသည့်နေရာများ အချက်အလက်များကို အကြောင်းအရာများကို
ဝေဖန်လိုသူများကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ။ သင့်အတွက် မဟုတ်သလို ကျုပ်အတွက်လည်း မဟုတ်ပါ ။
တော်လှန်ရေးကို ရေသာခို လိုက်နေသူများနှင့် လူငယ် လူသစ်များ ဖတ်ရန်ဖြစ်ပါသည် ။ ပါဝင်ရေးသား အကြံပြု ကြပါ
အေးစက်နေတဲ့ သေနပ် ဖိုင်ဘာအစိတ်အပိုင်းကို ပူပန်နေစိတ်နဲ့တင်းတင်းဖိကိုင်ရင်း ပူနွေးလာပါတယ် ။
၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလက စစ်အာဏာသိမ်းပြီး စစ်ရူးတွေအမိန့် ကို အောက်ခြေကရဲဘော်လေးတွေက သေနပ်တွေနဲ့ကျောင်းသားပြည်သူတွေကို ပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ် ။ ကျောင်းသားတွေ အုပ်စုလိုက် လူမျိုးစုတွေဆီမှာ လက်နက်တောင်းဖို့ သွားခဲ့ကြပါတယ်
သေနပ်ဆိုတာ လူသတ်လက်နက်ပါ ။ ထက်နေတဲ့ ဒါးတောင် မကိုင်တတ်ရင် မ်ိမိလက်ကို လှီးမိပါတယ် ။ သေနပ်မကိုင်တတ်ရင် အန္တရာယ်ရှိပါတယ် ။
ထိုအတူ သေနပ်ကိုင်ထားသူရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာ အများစုအတွက် ပြည်သူ့ လုံခြုံရေးအတွက် ခံယူချက်မရှိရင်လဲ
သူခိုးထက်နဲနဲသာသူ ဒါးပြ အဆင့်ပါဘဲ ။ ဒီကနေ့ မြန်မာပြည်ထဲက နေပြည်တော်လက်အောက်ခံ လက်နက်ကိုင်သူတွေ အားလုံးဟာ
၁၉၆၂ ခုနှစ်က စပြီး ပြည်သူ့ အာဏာ လုယူခဲ့လို့သူခိုး ဒါးမြ အဆင့်ပါ။ ဆိုရှယ်လစ်ကို နားမလည်ဘဲ ဖုတ်ပူမီးတိုက် သင်တန်းတွေနဲ့ရိုက်ထဲ့ပေမဲ့ လဲ ၁၉၈၇ မှာ မြန်မာပြည်ဟာ အဆင်းရဲဆုံး အဆင့်ကိုရောက်သွားပါတယ် ။
သူခိုး ဒါးပြ ပီပီ ဖြစ်လာတဲ့ပြသနာတွေကိုလည်း သူခိုးနည်းနဲ့ ဖုံးဖိ လိမ်ညာခဲ့ ကြတဲ့အဆုံး ၁၉၈၈ က အမှန်တရားဘက်တော်သား ကျောင်းသားက စပြီးတော်လှန်လို့ နာမည်ခံ မဆလကြီး ပြုတ်ခဲ့ပါတယ် ။ နေဝင်း စိန်လွင် မောင်မောင် ၃ ဆက်ပါ ။
၂၀၁၀ မှာလည်း လူညီရင် အဖွဲ့ တွေ ညီညွတ်ရင် အာဏာရှင်ပြုတ်နိုင်ပါတယ် ။
အစိုးရသစ်အတွက်လဲ ၁၉၈၈ တုံးကလို သိပ်ရှာစရာမလို အဆင်သင့်ဘဲ
သူခိုး ဂျပိုး လူသတ်သမား ဒါးမြ ဇာတိရုပ်က ဆိုရှယ်လစ်နဲ့ အုပ်ထားတာ ဘွားကနဲ
၁၉၈၈ က ၁၈ စက်တင်ဘာလမှာ ပေါ်သွားပါတယ် ။
အခုတော့ တော်လှန်ရေးနယ်မြေထဲမှာ သင်တန်းပြီးတဲ့ ကျောင်းသားတွေ လက်နက်ကိုယ်စီနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြပြီ ။
အေကေ ၄၇ သေနပ်မှတဆင့် ဥက္ကဌကြီး စောမော်ရယ်(၁၉၈၈ ၁၉၈၉ NDF) ၏အသံများ နားထဲ စီး ဝင်လာ ပါသည် ။
အဲဒီ၁၉၈၈ အောက်တိုဘာလမှာတုံးက ကျွန်တော်က ဟွေစေတီ စခန်းကော်မတီ
လုပ်ငန်း စစ်ဆေးရေး အတွင်းရေးမှုး တာဝန်ယူနေတဲ့အချိန်ပါ ။
၁၉၈၈ လူထုအုံကြွတောင်းဆိုမှုကနေ ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့ စည်းနေတုံး စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလို့ 
လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးနဲ့ အပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာ နှေးနေတယ် သုံးသပ်မိပါတယ် ။
ီ ဦးစောမော်ရယ် လှေနဲ ရောက်လာကာ ကျွန်တော့ ဝါးတဲကို လာပြီးကျောင်းသားတွေ ရှာစားတာ ကင်းလိပ်ချောနဲ့ ပုတ်သင်ညိုတွေကုန်ပြီကြားတယ် ။ လိုက်ခဲ့ကြ ငှက်ပစ်ထွက်မယ် ။
ကိုဂဏန်း ကိုတင်ဝင်းအောင် ကိုသိန်းနိူင် ကိုဇော်လင်း(မကသ) ကိုဂါမဏိ(လက်ဝှေ့ ) ကို မန္တလေးတို့ ကမျက်စိမှိတ်ပြပါတယ် လိုက်သွားတဲ့ ။
ကိုဆန်နီ (အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး) ရစ်ချပ်ဌေးရယ်(ဥက္ကဌကျောင်းသားစခန်း) တို့ လည်းနောက်က ပါလာသည်
အန်ဒီအက်ဖ် ဥက္ကဌ လှေကိုစုန်စီးပြီး ငှက်ပေါသည့် တောထဲရောက်တော့
လူနဲတာနဲ့ရင်ထဲက အောင့်ထားတာတွေ မေးမိပါတယ် ။
စခန်းမှာနေတုံးက ဦးပြည်မရှိရင် တကျီကျီနဲ့ကျောင်းသားတွေ ပြောနေကြတဲ့
အဘတို့ လူမျိုးစုတပ်ပေါင်းစုက ရေဒီယိုကနေပြီး ကျေညာခဲ့တယ် ။
ပြည်တွင်းက ကျောင်းသားတွေကို လိုအပ်တာတွေအကူအညီပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆို ။
အခု လက်တွေ့ မှာ ငပိတောင် နပ်မမှန်ဖြစ်နေပြီ ။ လက်နက်ဆိုတာ အဝေးကြီးလဲ ။
ကျွန်တော် လူထုလွတ်မြောက်ရေး ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးအတွက် အားမနာတော့ပါ ။
စခန်းထဲမှာ နားပူနဆာ အမြဲလုပ်ခံနေရတဲ့ ကိစ္စမေးပါတော့တယ် ။
ဦးစောမော်ရယ်က ခပ်ပြုံပြုံး ရင့်ကျက် လေသံအေးအေးနဲ့ 
ခင်ဗျားတို့ ကျောင်းသားတွေ လက်နက်လိုချင်တာ နားလည်ပါတယ် ။
ခင်ဗျားတို့ ကျောင်းသား တော်လှန်ရေးကို အခုမှ စတင်ပြင်ဆင်နေတာပါ ။
ကျွန်တော် စိတ်ထဲက မရိုးမရွဖြစ်သွားပါတယ် ။
နယ်စပ်မှာ စခန်းတွေ အခိုင်အမာဆောက် ကားတွေ လက်နက်တွေ အများကြီးနဲ့ 
ငါတို့ က ငပိတောင် နပ်မမှန်တဲ့ ဘဝ မို့ 
အဂ်လိပ် လက်အောက်လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင်စဉ်က စလာတဲ့ သမိုင်းကို ချန်ထားပြီး
ဒါဆိုရင် အဘတို့ ဘယ်လို စိတ်ဓါတ်နဲ့ တည်ဆောက်လာတာလဲဟု ငတ်ငတ်နဲ့ရွဲ့ပြီးမေးလိုက်ပါသည် ။
မောင်ရင်လေးတို့ကျောင်းသားတွေကို ရှင်းပြဖို့ စောင့်နေတာကြာပါပြီ ။
ဘယ်သူမှ ဒီမေးခွန်းမမေးလို့ စောင့်နေတာပါ ။
ဦးစောမောရယ်က သစ်ပင်ဖျားကို မော့ကြည့်လိုက်ပါတယ် ။
အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှုရင်းက သူ့ မျက်လုံးတွေဟာ တစတစနဲ့ရီဝေလာပါတယ် ။
ကျုပ်တို့ ပိုင်တဲ့ မြေကို ကျုပ်တို့ လူမျိုးတွေ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ အုပ်ချုပ်ခဲ့ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ် ။
ပင်လုံစာချုပ်ထဲမှာ ကရင်နီ လက်မှတ်မထိုးပါဘူး ။
ရလာတဲ့ အကျိုးဆက်က ပြည်မကြီးက စစ်တပ်တွေ
၁၉၄၈က စပြီး အကြိမ်ကြိမ် စစ်ဆင်ခဲ့ တာပါ ။
On August 9th 1948 at 04:00, the AFPFL military police attacked the headquarters of
the Karenni National Organization in Myaleh Daw.
On August 17, 1948 the United Karenni States Independent Army (UKSIA) was formed.
On August 19, 1948 the Karen National Defense Organization occupied Mawchi.
On December 29, 1948 the Kalaw-based Burmese troops attacked Loikaw.
On February 9, 1949 Saw Maw Reh,
a guard commander of Sawpja Saw Shwe was arrested by Burmese troops.
ဘတပြန် ကျားတပြန် ကရင်နီလွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲတွေနဲ့ အတူ
၁၉၆၂မှာ ဗိုလ်နေဝင်း အာဏာသိမ်းလိုက်တယ် ။
ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက် ကုန်သွားပါတယ် ။
တိုင်းရင်းသားတွေ တိုးတက်မှု အတွက် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်လေးရှိဘို့ ပါ ။
On July 5, 1963 the KNPP sentaletter, signed by Saw Maw Reh,
responding to the Burmese peace announcement.
On August 28, 1963 the Karen National Union,
New Mon State Party and KNPP jointly sentaletter to the Burmese regime
asathree-coalition party asking forajoint meeting to negotiate peace.
On October 4, 1963 leaders of the three parties arrived in Rangoon for
peace negotiation with the Burmese regime. However,
negotiation was collapsed and
the Burmese troops pushed three parties’ leaders back into the jungle.
In December 1964 Saw Maw Reh was elected to be the seventh KNPP chairman.
In 1976 the PNDF was renamed the National Democratic Front.
KNPP wasamember of it and later withdrew from the NDF in 1996.
သေချာတာက အဲဒီတုံးက ကရင်နီသမိုင်းကို တိတိကျကျမလေ့လာခဲ့ဘူးပါဘူး။
ကရင်နီမှာ နေခဲ့စဉ်က ကြားခဲ့သည်များကို ပြန်ရေးတာပါ ။ မှားခဲ့ရင် နားလည်မှုပေးပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဇော်လေး ၊ သမိုင်းမှန်ကို လမ်းညွန်ပေးလို့ 
အေးချမ်းပြီး ဖေါ်ရွေရိုးသားတဲ့ ကရင်နီပြည်ကို
မသေခင်လောက်တော့ ပြန်လည်ချင်ပါသေးတယ် ။
ဆရာရေမင်ထူး ဆရာဖုန်းနိုင် မိသားစုတို့ ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်
ကျောင်းသားလေးတွေ ကရင်နီကို ပြန်လာလည်ပါအုံးတဲ့ ။
ကျွန်တော်တို့ ကတောင်ပေါ်မှာနေကြတာ ။
တောင်ပေါ်ရဲ့ သဘာဝ ရေမြေတော တောင်တွေကို နားမလည်ဘဲ
မြေပြန့် ကလူတွေက အာဏာရူးတွေ ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်မလဲ ။
ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားပိုင် သယံဇာတတွေ ပျက်စီးတော့မှာလို့ မြင်မိတယ် ။
မြန်မာပြည်မက နိူင်ငံရေးသမားတွေနဲ့နေဝင်း စစ်တပ်ဟာ တနေ့ ကြရင်
ကယားပြည်နယ်(ကရင်နီနိူင်ငံ) ကို ကျူးကျော်ပြီး လူထုကို နှိပ်စက်လာနိုင်တယ် ။
ကရင်နီလူထုကို ပြည်မနဲ့ ဝေးရာမှာ နေပြီး အင်အားစုပြည့်စုံတဲ့ တချိန်မှာ သီးခြားလွတ်လပ်သော
ကရင်နီနိုင်ငံထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ် တခုထဲနဲ့ နယ်စပ်ဘက်က တောထဲကိုထွက်လာခဲ့တာပါ ။
ကျောင်းသားတွေ တောထဲရောက်တော့ နေစရာ စားစာတွေနဲ့ ပါ ။
တော်လှန်ရေးနယ်မြေဆိုတာ တည်းခိုခန်း မှာနေသလိုတော့ ဘယ်ပြည့်စုံပါ မလဲ ။
ကျွန်တော့ လူတချို့တောထဲကို စပြောင်းတော့ ၂ ပေလောက်ရှိတဲ့ ဓါးမကြီးတချောင်းဘဲ ပါလာပါတယ် ။
စစ်တပ်ကတော့ ကျွန်တော့ကို တောခိုတယ်လို့နောက်ကလိုက်ပြီး သမုတ်တာ နောက်မှသိပါတယ် ။
ဓါးမကြီးတချောင်းနဲ့တော်လှန်ရေး စလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့သူ ဦးစောမော်ရယ် က
၁၉၈၈မှာ လူ လက်နက်ကိုင် ၃သောင်းကျော်ပါဝင်တဲ့
NDF ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ ဥက္ကဌ နေရာမှာ တာဝန်ယူနေ တုံးလေ ။
ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသလို စာဖတ်သူများနဲ့ နောက်လူငယ်တွေလည်း စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်ပါသည် ။
ကရင်နီ တွေချောင်းဘေးမှာ တဲဆောက် တဝမ်းစာ တောင်ယာခုတ်ပြီး ရိက္ခာစပြီးစုပါတယ် ။
အချိန်ရရင် ရွာတွေဝင်ပြီး မြန်မာ ရဲ စစ်တပ်နဲ့ ပြတ်ဿနာဖြစ်ပြီး ရွာမှာနေလို့ မရသူတွေကို ခေါ်လာပြီးလူစုကြတယ် ။
သိုင်းသင်ကြတယ် ။ နောက်တော့ ရဲကင်းစခန်း ငယ်ငယ်လေးတွေကို ဓါးမတွေနဲ့ တက်ခုတ်ပြီး သေနပ်လုကြပါတယ်တဲ့ ။
ကရင်နီက လွတ်လပ်ရေးလိုချင်သူတွေ ကြိးစားခဲ့သူတွေသမိုင်း
တိုင်တရာကို ချိန်သားကိုက်ရင် ယင်ကောင်တောင် မလွဲတဲ့ ရိုင်ဖယ်ခေတ်ကပါတဲ့ ။
ဒီလိုနဲ့ တစတစနဲ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ သက်တမ်းရှည်လာပါတယ်ဟုပြောပါသည် ။
ကျောင်းသားတွေ ဦးဆောင်မှုနောက်မှာ လူထုရှိရင် တော်လှန်ရေးဟာ ခဏပါဘဲလို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ။
ကျောင်းသားတွေကတော့ အဆင်သင့်ပါဘဲ ။
လူမျိုးစု ကျောပေါ်ကနင်းပြီး အောင်မြင်အောင် လုပ်ကြ ဟုပြောပါသည် ။
ကျောင်းသားနဲ့ ပြည်သူ အစေးမကပ်အောင် ထောက်လှန်းရေးကလဲ နည်းမျိုးစုံ သုံးခဲ့တာ အခုထိဘဲ ။
(တချို့ ကျောင်းသားတွေ တကယ်ယုတ်မာပြီး လုပ်ခဲ့ပါသည် ။
၁၉၈၈ကို ဝေလေလေ အဖွဲ့ ထဲမှာပါလာပြီး ဇွဲမရှိဘဲ
ကြိုဆိုရေးစခန်းမှ ပြန်ကာ မြက်ခင်းသစ် စာစောင်ထုတ်ပြီး
အဝီစိမှာ ဂျိုးကပ်အောင် စော်ကားပြီးရေးကြပါတယ်
အခုလည်း အီးမေးအုပ်စုတွေထဲဝင်လာပြီး သတ်သျှိုစာတွေ ရေးနေတုံးပါ ။ )
ကျွန်တော် နားလည်သဘောပေါက်သွားပါသည် ။
တခါတည်း ရစ်ချက်နဲ့ ဆန်နီကို ခေါ်ပြီး ကျောင်းသားများ စစ်သင်တန်းကိစ္စများ
လက်နက်ဝယ်ယူဖို့ သစ်ရောင်းရန် စသည်တို့ ကို ဆွေးနွေးခွင့်တောင်းဖြစ်ပါသည် ။
တော်လှန်ရေးနယ်မြေ တည်တန့် ခိုင်မာနေသမျှ
(၃၀၃ တပ်နာမည် မရခင်ကပင် ကရင်နီက ကျောင်းသားတွေ
စစ်သင်တန်းများပြီးကာ နယ်မြေ လုံခြုံရေး တွဲပြီးယူခဲ့ပါသည် ။
သံလွင်မြစ်ကမ်းပါးတွေမှာ ခံစစ်စခန်းတွေ နေရာချခဲ့ပါသည် ။
တောင်ပေါ်က လက်ထောင်းဆန်ကြမ်းနီနီစေးစေး နဲ့ 
လက်ကြိတ်မြေပဲဆီကတော့ ပေါင်မုန့် ထောပတ်နဲ့ မလဲနိူင်ပါ ။
ပဲပုတ် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အခြောက်က မီးဖုတ်ရင်
KFC ကြက်ကျော်တောင် နောက်ဆုတ်ရမယ်နော့်
၁၉၈၈ နိူဝင်ဘာ မှာ ပြည်တွင်းကို ယူဂျီတွေ စဝင်ကြပါပြီ။
ကယားပြည်နယ်ထဲမှာ ကျောင်းသားပါတဲ့ တိုက်ပွဲငယ်တွေ စနေပြီဖြစ်ပါသည်၊
ရေကျော်မှာခေါင်းဆောင်တွေ စကားနိုင်လု စကားများလို့ ကောင်းနေ ပါသေးသည် ။
ကျွန်တော် မယ်နပလော လူမျိုးစု စစ်ဆင်ရေးရုံးတွင်
ဦးခိုင်စိုးနီုင်အောင် ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင် (ကေအန်ယူ)နဲ့ လက်နက် ကိစ္စများ ညှိနှုင်းပြီး
ကရင်နီပြည် ကျောင်းသား စခန်းသို့ ပြန်ခဲ့ပါသည် ။
ဒီဇင်ဘာလ ရှေ့ တန်းက အပြန် မယ်နပလောမှာ သင်တန်းတက်ပြီး
ပြည်တွင်း လှုပ်ရှားမှုနဲ့ နယ်စပ် စစ်ဆင်ရေး အတွက်
ကျောင်းသားတပ်မတော် ဌါနချုပ်စစ်ရေးကော်မီတီကို ဝင်ရောက်တာဝန်ယူရပါသည် ။
စစ်အာဏာရှင် စစ်တပ်တွေ ကရင်နယ်မြေကို စစ်ဆင်သောအခါ
ကရင်ပြည်နယ် ကာကွယ်ရေးမလုပ်နိုင်ဟု တချို့ ကအော်ကာ
အနေအစား ချောင်သည့် ဘုရားသုံးဆူ မဲဆောက် မဲအောင်ဆောင် တက်ပြေးသူများရှိ ဘူးပါတယ် ။
တပ်ရင်း ၂၀၆ မှ ကိုသန်းနိုင်တပ်ခွဲ (၁) နဲ့ကိုမျိုးချစ် တပ်ခွဲ (၄) က
ကရင်နယ်မြေ ခုခံစစ်အတွက် ဖလူးတွင်တာဝန်တွဲယူမည်ဟု အကြောင်းကြားပါသည် ။
ထိုအချိန်တွင် ဝမ်ခစစ်မြေပြင်မှာလည်း ကျောင်းသားတပ်ရင်း ၂၁၁ ( မူလဖွဲ့ စည်းပုံက၂၀၁ ဟုသတ်မှတ်ပါသည် )
က တာဝန်ယူပြီး ကရင့်တပ်မတော်နှင့် အတူတိုက်ပွဲ ဝင်နေပါသည်။
ဘုရားသုံးဆူမှ ကျောင်းသားတပ်ကလဲ တပ်ခွဲမှုး ကိုကျော်သက်တို့ ဦးဆောင်ပြီး စစ်ကူလိုက်လာပါတယ် ။
ပြန်စဉ်းစားမိလျှင် ပါဝင်ခဲ့သူများကိုယ်စား ကြက်သီးများ ထအောင် ဂုဏ်ယူမိပါသည် ။
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး လုပ်ရန် တောထဲဝင်ခဲ့သူ ကျောင်းသားခေါင်ဆောင်တချို့ 
ငလျှင်လှုပ်သလို ဖြစ်နေသော ခံစစ်စစ်မြေပြင်ကို ကြောက်ကြပါပြီ။
အဆိုတော် ကို မွန်းအောင်ကတော့ ဗုံးသံတွေ ပွိုင့် ဖိုက်သံ တွေ
နားထောင်ရင်း သီချင်း အသစ်တွေရေးသွားပါသည် ။
အတွေးလွန်သွားပြီး ခလုပ်တိုက်ကာ လဲမလို ဖြစ်သွားပါသည် ။
သေသေချာချာ မမြင်လို့သဲသဲကွဲကွဲ မြင်အောင် ငုံ့ ကြည့်လိုက်တော့
သဲရောထားတဲ့ မြေပြင်ဟာ သွေးတွေ ပက်ထားသလိုပါဘဲ ။
တိုက်မိတဲ့ ခလုပ်ကြီးက စစ်ဘောင်းဘီနဲ့ စစ်ဖိနပ်ကြီးပါလား ။
ခြေထောက်နဲ့ ကန်လိုက်တော့ စစ်ဖိနပ်စီးထားတဲ့ ခြေပြတ်ကြီးပါလား ။
ဖလူးက ဆုတ်ခွာပြေးရင်း ပြတ်ကျန်ခဲ့တဲ့ ပိုင်ရှင်မဲ့ ခြေထောက်ပြတ်ကြီးပါလား ။
သွေးတွေ အလုံးလုံးနဲ့ ပိုင်ရှင်က စွန့် ခဲ့ပြီနော် ။
ပိုင်ရှင်က ကရင်တပ်က ရဲဘော်လား ကျောင်းသားတပ်က ကျောင်းသားလား
ရင်နှစ်ခြမ်း ဗျန်းဗျန်း ကွဲပါစေ
ဘယ်ကလာ မှန်းမသိတဲ့ သေမင်းကို
ဒူးမထောက်နဲ့လက်မမြောက်နဲ့ သူငယ်ချင်း
သူသေ ကိုယ်ရှင်လဲ ပစ်ဘူးတယ်
တင်ပြသူ Mr Htay Tint at 11:20 a.m.3comments: Links to this post
ကိုသန်းနိုင်နဲ့ ကျွန်တော်တို့၆ ယောက်
နေရာက ဖလူးစခန်း တဖက်ကမ်းက မက်ကိုကင်းရွာအစွန်က
ကရင့်တပ်မတော် လက်အောက်ခံ မူဆလင်တပ်ဖွဲ့ ဝင်တဦးရဲ့ တဲငယ် ။
အချိန်ကာလက ၁၉၈၉ အေးချမ်းလှတဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ နံနက် ဝေလီဝေလင်းစ
၁၉၈၈ကျောင်းသားများ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး မလုပ်နိုင်ရန် နှင့်
အမြစ်ပြတ် ခြေမှုံးရန် လူမျိုးစုနယ်မြေ အားလုံးကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ထိမ်းချုပ်ရေး စီမံချက်ကာလ
ချောင်းရေသည် ကြည်လင်နေပြီး အောက်ခြေကို ရှင်းရှင်းကြီးမြင်နေရသည် ။
နံနက်လင်းခါစ နေစထွက်သည်ဆိုသော်လည်း အလင်းရောင်ပြပြသာမြင်ရသည် ။
နေလုံးသည် တောင် ၂ လုံးကြားက ချောင်းကိုတိုက်ရိုက် အလင်းရောင်မကျနိုင်သေးပါ ။
ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ဆိုလျှင် ရေငွေ့ ဖြူဖြူ မြူမူန်များ တွေ့ နေရသေးသည် ။
ရှုလိုက်သောလေထဲမှာလဲ သစ်ပင် သစ်ရွတ် အနံ့ နှင့်အတူ တချက်တချက် ပန်းရနံ့ များရပါသည် ။
စစ်ရေဘူးထဲကရေကို လက်ခုတ်နဲ့ ရေခပ်ပြီး အာလုပ်ကျင်းလိုက်ပါသည် ။
ပြောပြမတတ်သော လေးပင်သည်လား ဆိမ့်နေတာလား မသိသော
ရေ၏အရသာသည် နှတ်ခမ်းဖျားကို စိုစွပ်ပြီး အာခေါင်အဖျားအထိ ရောက်သွားသည် ။
အော် မြန်မာပြည်က ထွက်ကုန်တွေထဲက ရေတောင် အရသာရှိပါလားလို့ တခြားနိူင်ငံတွေ ရောက်မှ တန်ဖိုးကိုနားလည်မိသည် ။
သောင်ရင်းမြစ်ကို တချက်ကြည့်ပြီး မိမိတို့ ရုံးရှိရာဖုက်ကို မျှော်ကြည့် လိုက်သည် ။
မီးခိုးမှုတွေကြားမှာ သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရသေးပါ ။
အခုလောက်ဆို စားဖိုဖုတ် က ချက်ပြုတ်ပြီးလောက်ရောပေါ့
ကျောင်းသားရဲဘော်တွေလည်း တညလုံးတာဝန်ယူထားတာဆိုတော့ ဆာကြပြီပေါ့ ။
(အမြောက်ကျည်ဆံ ဒဏ်ခံရန် သစ်လုံးများအောက်တွင် ၁၀ပေ ပတ်လည် အနက် ၅ ပေ ကျင်းတူးပြီး အိပ်သည့် ကျည်ကွယ်မျက်ကွယ်ကို ခေါ်ပါသည် ။တချို့ က ဘန်ကာ ဟုလည်းခေါ်ပါသည် )
နောက်မှ ချွတ်ချွတ် အသံ ခြုံကြားမှ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုသန်းနိုင် ။
စစ်ဘောင်းဘီရှည် ဇစ်ကို ဆွဲရင်း ကားရား ကားရား တောထိုင်ရာက ကမန်းကတန်းပြန်လာပုံရပါသည် ။
အားလုံး နိူးကုန်ကြပြီလား ။ စခန်းပြန်မယ် ။ ကျွန်တော့ ရဲဘော်တွေကို စိတ်ပူနေပြီ ။
ယိုင်နဲ့ နဲ့ ဝါးတဲ ထဲမှ ကိုဇော်ဇော် (၈၈ တတိယနှစ် မှာ တတိယနှစ် ကျောင်းသား ယခု ကနေဒါမှာနေ) ကိုကျော်မင်းဦး ( ၈၈စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ။ သတင်းပျောက်)
ကိုမောင်လှ (မဲဆောက်) ကိုနေမျိုး ကိုအေးဝင်းတို့ တသိုက် အိပ်ချင်မူးတူးနှင့် ထလာကြပါသည် ။
မရှိလို့ ထွက်ဝယ်တာ အေးအေးဆေးဆေးပေါ့လို့ကိုနေမျိုးက လည်ချောင်းကွဲသံဖြင့်ပြောလိုက်သည် ။
ကိုသန်းနိူင်မျက်နှာညိုညိုက ရဲကနဲ မဲသွားပါသည် ။
ငါတို့ ဒီဘက်ကမ်းကို အပျော်လာတာမဟုတ်ဘူး ။
တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ စခန်းထဲမှာ ကျောင်းသားရဲဘော်တွေ ထမင်းဆာပြီ ။
ရိက္ခာ တာဝန်ခံ ကိုဇော်ဇော် အထုတ်တွေ အဆင်သင့်လုပ် ပြီးရင် ထွက်မယ် ။
ကိုသန်းနိူင်က ကျွန်တော့နားကပ်လာပြီး တိုးတိုးလေးပြောပါတယ်
“ကိုဌေးတင့် ကျွန်တော်က အရမ်း စိတ်ပူတတ်တယ် ။
သပိတ်မှာကထဲက အတူတူ သေဖေါ်သေဖက်လုပ်လာကြတာ ဘာရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး
သူတို့ အားလုံးအတွက် စိတ်ပူလို့ ပါ ။
ကိုသန်းနိူင် စိတ်ပူလွန်ပြီး အမေရိက ရောက်တော့ နှလုံးကို ဖြုတ်လိုက်ပြီး စက်နဲ့ အစားထိုးရတယ်နော်”
နောက်ဆုံးတော့ လူကကောင်းကောင်းကြီး အပူလွန်တဲ့စိတ်ကို စက်နှလုံးက မလိုက်တော့ဘူးထင်တယ် ။
အသံပြာပြာ နားထဲဝင်လာပါသည် ။ ကြားလား ကြားရင်အကြောင်းပြန် သန်းနိူင် ။။ နားနားကပ်အော်လိုက်တာပါ ။
ကျွန်တော်လည်း ညကအရှိန်နဲ့အော်ဟုတ်လားဟု မူးကြောင်ကြောင် အဖြေပေးတတ်တာ အခုထိထင်ပါတယ် ။
ကိုဇော်ဇော်ကတော့ လူငယ်ပြီပြီ သွက်လက်ချက်ချာပါတယ် ။အခုထိပါဘဲ ။
နေမျိုးတယောက် အခုထိမူးနေတုံးဘဲလား မသိဘူးနော် ။
မောင်လှကတော့ စကားနည်းတယ် ။ အမြဲတန်းတခုခုက်ို ငြီမ်ပြီးစဉ်းစားနေတတ်တယ် ။
တနိူင်ငံစီ ဝေးကုန်ကြပြီနော် ။
ကျောပိုးအိတ် တလုံးစီနဲ့ ရိက္ခာတွေထမ်းပြီး သောင်ရင်းမြစ်ဆီသို့ ချီတက်ကြပါတယ် ။
မြစ်နားနီးလာတော့ စစ်ယူနီဖေါင်း အချို့ ကို လမ်းဘေးတွေမှ ပစ်ထားတာ မသဲမကွဲ မြင်ရပါတယ် ။
ရေတွေလဲ လမ်းမှာစိုနေပါတယ် ။ မကောင်းတဲ့ အတိတ်နမိတ်ပါဘဲ ။
ကိုသန်းနိူင်နဲ့ ကျွန်တော်က ရေစိုဝတ်တွေကို ကိုင်ကြည့်ရင်း စခန်းထဲမှာ တခုခုဖြစ်နေပြီ။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ ည မှာ စခန်းတာဝန်ခံ ကရင်ခေါင်းဆောင်တွေ
ဝါလေ ဌါနချူပ်မှာ ပြန်စုပြီး ယေရှုခရစ်တော်မွေးနေ့ ကျင်းပနေကြတယ် ။
မြန်မာအာဏာရှင် စစ်တပ်ကတော့ အစွမ်းကုန်ယုတ်မာပြီ ထင်တယ် ။
ကျွန်တော်တို့ အခြေအနေကို သုံးသပ်ပြီး ခေါင်းနပန်း ကြီးသွားပါသည် ။
စခန်းကို စွန့် ခွာကြပြီလား ။ စခန်းကျပြီ လား ။ ငါတို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ ။
တိုင်ပင်စရာမလိုဘဲ ရ ယောက် ခေါင်းခြင်းဆိုင်လိုက်ပါသည် ။
ကိုသန်းနိူင်က ကျွန်တော်ရသလောက် စခန်းထဲကို ခိုးဝင်မယ်
၄၅ဘို့ ပစ္စတိုချိတ်ထားသော ခါးဘက်ကို လက်ထောက်ပြီး ပြောလိုက်ပါသည် ။
ကျောင်းသား ရဲဘော်တွေရဲ့ အခြေအနေကြည့်ဘို နဲ့ ကူညီဘို့ အသက်ပေးသင့်ရင် ပေးရမယ် ။
ဘယ်သူလိုက်မလဲ ဟုမေးပါသည် ။
ကျွန်တော်လိုက်မယ် ဆိုတဲ့အသံက ၆ ယောက်စလုံး စက္ကန့် မခြားဘဲ
တပြိုင်ထဲ ထွက်လာပါသည် ။
ကျွန်တော်အပါအဝင် စခန်းမှာနေစဉ်က တာဝန်ခွဲတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ
နောက်က ပုန်းနေတတ်သူတွေပါ ညနေ ထမင်းစားပြီး လေပေါကြရင် နားထောင်တတ်သူတွေပါ ။
စကားကို အပိုမပြောဘဲ အလိုပြောတတ်ကြသူတွေပါ ။
အခုကာလမှာလို ပြည်ပမှာ ခေါင်းဆောင်နေရာလုသူတွေ ရေဒီယိုမှ ဖိုးပြောချင်တွေကို
သူငယ်ချင်း ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေအတွက် အသက်စွန့် ကူညီရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ကြပါဘီ ။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အပ်ိုပစ္စည်းများ သစ်ပင်ကြီး တပင်အောက်တွင် သစ်ခက်များနှင့် ဖုံးပြီးဖွက်လိုက်ပါသည် ။
အေကေ ၄၇ တလက်စီ ကျည်ထိုး ။ လက်ပစ်ဗုံးများကို အလွယ်ပစ်ရန် ရင်ပတ်မှာ တွယ်လိုက်ပါသည် ။
အသက်တွေကို ဝဝရှုလိုက်ကြသည် ။
ကျည်ဆံ သေမင်းတမံဟာ အချိန်မရွေး ရင်ဘတ်ထဲကို ဝင်မည့်
စခန်းထဲသို့ဝင်ကြတော့မယ် ။
အမှန်တရားနဲ့ဘုရားသ္ခင်ဟာ ငါတို့ ဘက်မှာရှိနေတယ့် စိတ်နဲ့ 
လမ်း လက်ဝဲ လက်ျာကို ကပ်ပြီး အသင့်အနေအထားဖြင့် သောင်းရင်းမြစ်ဆီသို့ ချီတက်ကြပါတယ် ။
တောငယ်လေးတခုလုံး တ်ိတ်ဆိပ်နေမှုဟာ စစ်ဖိနပ်နင်းလိုက်ရင် ပြန်ကြားနေရပါတယ် ။
ပူပင်နေသော နှလုံးသားရဲ့ သွေးခုန်နူံးသံကို နားထင်သွေးကြောများမှတဆင့်
တဒုံးဒုံနဲ့ စစ်ဖိနပ်သံနဲ့ အညီ စည်းချက်ညီညီ ကြားနေရပါသည် ။
၆ မေ ၂၀၁၀
တင်ပြသူ Mr Htay Tint at 5:30 a.m. No comments: Links to this post
ကိုသန်းနိူင်နှင့် ကျွန်တော်တို့ ၆ ယောက်( အပိုင်း၂)...
တော်လှန်ရေးကို မိမိမျက်စေ့ ရှေ့ က စတင်ကြဖို့ လိုပါ...